Wararka - Nokia Bell Shaybaarka adduunka wuxuu diiwaangeliyaa hal-abuurnimo ku saabsan fiber optics si uu awood ugu yeesho karti iyo karti sare shabakadaha 5G ee mustaqbalka
Dhawaan, Nokia Bell Shaybaarka ayaa ku dhawaaqay in cilmi-baarayaasheeda ay dhigeen rikoodh adduunka ah heerka ugu sarreeya ee hal-xambaara heerka qiyaasta halbeegga halbeegga halbeegga ah ee 80 kiiloomitir, ugu badnaanna 1.52 Tbit / s, oo u dhiganta gudbinta 1.5 milyan YouTube fiidiyowyo isla waqti isku mid ah. Waa afar jibaar tikniyoolajiyadda 400G ee hadda jirta. Diiwaankan adduunka iyo hal-abuurka shabakadaha kale ee indhaha ayaa sii xoojin doona awoodda Nokia ee horumarinta shabakadaha 5G si loo daboolo xogta, awoodda, iyo daahitaanka baahiyaha Internet-ka ee Waxyaabaha iyo codsiyada macaamiisha.
Marcus Weldon, Madaxa Sarkaalka Tiknoolajiyadda ee Nokia iyo Madaxweynaha Nokia Bell Labs, ayaa yidhi: “Tan iyo markii la ikhtiraacay fiilooyinka indhaha ee khasaarahoodu hooseeyo iyo qalabka indhaha ee la xidhiidha 50 sano ka hor. Laga soo bilaabo nidaamkii ugu horreeyay ee 45Mbit / s illaa maanta nidaamka 1Tbit / s, Wuxuu kordhay in ka badan 20,000 jeer 40 sano gudahood wuxuuna abuuray aasaaska waxa aan u naqaanno internetka iyo bulshada dhijitaalka ah. Doorka Nokia Bell Labs wuxuu had iyo jeer ahaa inuu ka horyimaado xadka oo dib u qeexo xadka suurtagalka ah. Rikoorkeenii ugu dambeeyay ee adduunka ee baaritaanka indhaha wuxuu cadeynayaa markale Waxaan soosaaraynaa shabakado dheereeya oo ka awood badan si aan aas aas ugu dhigno kacdoonka warshadaha ee soosocda. ”Kooxda Cilmi Baadhista Shabakada indhaha ee Nokia Bell Labs oo uu hogaaminayo Fred Buchali waxay abuurtay hal xarag oo xoogaa ilaa 1.52Tbit / s. Rikoodhkan waxaa lagu aasaasay iyadoo la adeegsanayo nooc cusub oo ah 128Gigasample / labaad oo soo saari kara calaamado heer calaamadeed ah 128Gbaud, iyo heerka macluumaadka hal calaamadood ka badan yahay 6.0 jajab / calaamad / kala-goyn. Guushani waxay jebisay rikoorkii 1.3Tbit / s ee ay kooxdu abuurtay bishii Sebtember 2019.
Cilmibaaraha Nokia Bell Shaybaarka Di Che iyo kooxdiisa ayaa sidoo kale dhigay rikoor cusub oo ah heerka xogta adduunka ee leysarka DML. DML laser-ka ayaa lagama maarmaan u ah qiime jaban, codsiyo xawaare sare leh sida iskuxirka xarunta xogta. Kooxda DML waxay ku guuleysteen heerka gudbinta xogta in ka badan 400 Gbit / s in ka badan xiriir 15-km ah, iyagoo dhigay rikoor adduunka ah. Intaas waxaa sii dheer, baarayaal ka tirsan Nokia Bell
Shaybaarada ayaa dhawaan waxay gaareen guulo kale oo waa weyn oo dhanka isgaarsiinta indhaha ah.
Cilmi-baareyaasha Roland Ryf iyo kooxda SDM waxay dhameystireen tijaabadii ugu horreysay iyagoo adeegsanaya tikniyoolajiyadda 4-core isku xira-xuddunta ah oo dhererkeedu yahay 2,000 oo kiilomitir. Tijaabadu waxay cadeyneysaa in fiber-ka xudunta isku xidha ay farsamo ahaan macquul tahay oo uu leeyahay waxqabad gudbineed oo sareeya, iyadoo la ilaalinayo dhexroorka heerka warshadaha 125um.
Kooxda cilmi-baarista oo ay hogaaminayeen Rene-Jean Essiambre, Roland Ryf iyo Murali Kodialam waxay soo bandhigeen qaabab cusub oo qaabab kala duwan ah oo bixin kara waxqabad toosan oo toos ah iyo mid aan toos ahayn oo gudbinta masaafada badda hoosteeda ah oo dhan 10,000km. Qaabka gudbinta waxaa soo saaray shabakad neerfaha waxuuna si weyn uga fiicnaan karaa qaab dhaqameedka (QPSK) ee loo adeegsado nidaamyada fiilooyinka badda maanta.
Cilmibaaraha Junho Cho iyo kooxdiisu waxay ku cadeeyeen tijaabooyin ku saabsan xaalada korontada oo xadidan, iyadoo la adeegsanayo shabakad neerfaha ah si loo hagaajiyo shaandhada qaabeynta faa'iidada si loo gaaro awood koror, awooda nidaamka fiilooyinka badda hoosteeda waxaa lagu kordhin karaa 23%.
Nokia Bell Labs waxay u heellan tahay qaabeynta iyo dhisidda mustaqbalka nidaamyada isgaarsiinta indhaha, wadista horumarka fiisikiska, qalabka sayniska, xisaabta, softiweerka, iyo teknoolojiyada indhaha si loo abuuro shabakado cusub oo la jaanqaadaya xaaladaha is beddelaya, iyo in ka sii fog xadka maanta.